Madaxweynaha Dawladda Federalka Soomaliya oo Manta Booqday Xerada Bara Kacayasha ee Bad baado One...
Madaxweynaha Dawladda Federalka Soomaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo Saraakiil uu hoggaaminayo ayaa ...
Date: 2012-01-11 11:16:07
Madaxweynaha Dawladda Federalka Soomaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo Saraakiil uu hoggaaminayo ayaa Manta Booqasho kormeer ah ku tegey Xerada Barakacayasha Bad baado eek u taala Xaafadda Dharkeenleey ee magalada Muqdisho.
Kormeerkan uu manta madaxweynaha ku tegey Xeradaas ayaa ahaa mid uu ugu kuur galayay nolosha dhabta ah ee halka ka jirta.
Madaxweynaha ayaa intii uu xeradas booqanayay waxa uu soo kormeeray qayabaha ay ka kooban tahay sida Kijinada Rashiinka lagu kariyo iyo goobaha ay seexdan Dadka bara kacayasha ah.
Madaxweyne Shariif aya war bixino ka dhagaystey Saraakiisha hawl wadeenada ka ah Xeradas isagoo isla markaana khudbad gaban u jeediyay Dadkii bara kacayasha aha oo ku soo xoomay goob uu madaxweynuhu joogay.
Shariif Shiikh Axmed ayaa dadkas u sheegey in xukuumaddu ay waddo qorshe dadkas dib loogu celinayo goobihii ay abaarta darteeda markii hore uga soo carareen.
Madaxweyne Shariif ayaa u mahad celiyay Hay’adihii sama falka ee gacanta ka gaystey samata bixinta dadkas oo ay abaaro soo sal kiciyeen.
Madaxweynaha Dawladda ku meel garka aya intii uu joogay xeradas wuxuu kaloo soo eegay Haamaha ay biyaha ka cabban Dadkas bara kacayasha ah.
Booqashadan uu manta madaxweynuhu Xeradas ku tegay aya waxa ay imaanaysaa xilli boqolaal ka mid ah qoysaskii halka hore ugu soo bara kacay ay halka isaga tageen ka gadaal markii degaanadii ay abaarata uga soo tageen ay heleen Roobab lagu diirsaday.
Sheikh Shariif ayanay ahayn markii u horeeyay ee uu Xeradas booqdo, waxaana la xasuusta in malmihii ugu horeeyay ee bara kacayasha xeradas la dejiyay inuu halka ku booqday tasoo dhowr bilood ay ka soo wareegeen.
Mas’uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda federaalka Soomaliya ayan u kala harin booqashada Xeradas waxana hallkaa horey u booqday isaguna Ra’iisul was are Gaz oo u kuur galay nolosha ay ku sugan yihiin dadka soo bara kacay.
Si kastaba shalay ayay ahayd markii bara kacaysha ku sugan xeradas ay sameeyeen banan bax cabasha ah oo ay ku dalbanayeen sidii gar gar dheerad ah loo soo garsiin laha Dadka Matida ah ee Xeradas ku dhaqan.